UThandeka ukhuza ibuya kwezokulingisa ngeHostela
UTHANDEKA Zulu we-Afro Soul oselingisa indawo kaNeli emdlalweni wethelevishini othi, Ehostela Isithombe:SITHUNYELWE
NGEMUVA kweminyaka emihlanu intokazi yasoThongathi, eHambanathi, uThandeka Zulu, yagcina ukubonakala kwithelevishini seyikhuza ibuya ngomdlalo oshisa izikhotha, i-Ehostela isizini yesibili. UThandeka, owake walingisa emdlalweni Uzalo, enguNombuso, uzoshubisa Ehostela. Kulo mdlalo ulingisa indawo yentombazane engukhandashisa, uNeli.
Uthi obekumenza anyamalale kwithelevishini ukuthi ubesematasatasa ngomculo njengoba eyilungu leqembu, i-Afro Soul, abambisene kulo noSergeant Malishe noSabelo Ngema. UThandeka uthi kuyintokozo kuye ukuthola ingqayizivele yethuba lokulingisa kwi-Ehostela ngoba uphinde wahlangana nozakwabo aseneminyaka esebenza nabo.
UThandeka uchaze kanje: “Ngiphinde ngafica nozakwethu engangisebenza naye uMjosti, odlala indawo ka-2litre. Nguye owangipha ithuba lokuqala ngqa lokulingisa kwithelevishini ngomdlalo owawuthi Kwaito Church Service. Ngabuye ngasebenza nomculi engimhlonipha kakhulu futhi engangingazitsheli ukuthi ngiyoke ngisebenze naye, uSjava.”
Uthe ukujabulele kakhulu nokuphinde asebenze nomngani wakhe omkhulu uKhaya Dladla abake balingisa naye kuZalo futhi nasemidlalweni kaMbongeni Ngema. “Kanti kade ngangikulangazelele ukusebenza nomqondisi wemidlalo yethelevishini ohlonishwayo emhlabeni jikelele, uMandla N. Nabantu basehostela okuyilapho siqophela khona lo mdlalo bangenze ngazizwa ngisekhaya.”
Ngonyaka ophelile le ntokazi iphinde yasebenza nengqalabutho kamaskandi, uMfiliseni Magubane, efilimini ebizwa ngeMaskandi Queen lapho beyidlala khona indawo eqavile kaNomagugu.
UThandeka akagxilile ekulingiseni nasekuculeni kuphela kodwa ubuye aqeqeshe abantwana abanamakhono emculweni, emdansweni nasekulingiseni, esikoleni se-Afrosoul, Ikabawo Performing Arts Academy.